EZT siiya Swing Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha EZT siiya Swing Forex Tusiyaha
EZT siiya Swing Forex Tusiyaha
The EZT siiya Swing Forex Tusiyaha waa mid ka mid ah tilmaame nooc. Waxayna u shaqaysaa iyadoo noocyada dhamaantood idiinkana yeeley lacagta. Waxa kale oo doorasho fiican ee jirrabo ganacsiga iyo biraha.
Marka la isticmaalayo Tilmaame this, Waxaad ku ganacsan kartaa mid ka mid ah wakhti ay bixiyaan aad madal MT4. Waxaad doortay karaa in ay isticmaalaan D1 ah, H4, H1, M15, M5 iyo M1 gooldhalinta. tilmaanta ha rinjiyeeyeen iyo haddii si fiican loo isticmaalo waxaa faa'iido ah oo ku wareegsan siin doonaa 1000 Liiska Forbes. Tani waa tilmaanta waayo, xataa bilowga ah.
tilmaame waxaa soo bandhigay shaxda hoos ku gaar ah shaxda ugu weyn ee ganacsiga. Waa arrin aad u hufan oo waxay awoodaa in la ogaado isbeddelka arrimuhu suuqa hore siinayo ganacsade gacanta sare. Waxaa dhab ahaantii waxay muujinaysaa in isku bed ee suuqa.
Fahamka sifooyinka of EZT ku gudaana Tusiyaha lulid
EZT The siiya Tusiyaha Swing foomamka band midabyo cagaaran, iyo kuwo gaduud hoos shaxda ugu weyn ee ganacsiga. waxba on shaxda ugu weyn waxay ku tusaysaa. Sidaa darteed ganacsade waxay leeyihiin meel ku filan in aad ku darto wax kasta oo kale in isaga ama iyada shaxda. band cagaaran midab muujinaysaa in qiimaha suuqa ayaa madax halka cas ayaa muujiyay, in qiimaha suuqa waa la madax. Waxaa jira qiyaasta on jaantuska tilmaamayaasha ah taas oo aan in badan oo muhiim ah tan iyo height of guutadii gacanta midig uusan isbedel. calaamadaha ganacsiga ayaa la siiyaa marka midabka ah ee guutooyinkiisa oo ay isbedesho.
lagugu tuday sawirka.1. Muujinaya sifooyinka of EZT ku siiya Tusiyaha Swing.
signal iibiso The waa marka uu isbedel color ka soo cagaaran in cas. Taas macnaheedu waa in sicirka suuqa ayaa joojiyay dhaqaaqin ilaa iyo hadda qiimaha suuqa waxaa hoos u dhaqaaqin. Marka la soo koobo isbedel, midhona ayaa bilaabay.
signal iibsan The waa marka uu isbedel color ka cas cagaaran. Tani waxay muujinaysaa in qiimaha suuqa ayaa joojiyay dhaqaaqin ilaa iyo hadda waxa ay madax u ah heerarka hooseeya. In gaaban, waxaa jira koror in hadda uun bilowday.
Saarid Xirfado isticmaalaya EZT ku siiya Tusiyaha Swing.
Sida ganacsade ah waa in aad meel aad ganacsi mar walba bilowga ah ee formation of laambadda soo socda ka dib markii signal la siiyo. tilmaame waa mid aad u sugan oo mar signal la siiyo suuqa lama filayo in si kasta oo ay u caraysan karaa signalka. Sidaas, ganacsade ah waa in aan ka cabsan ee furitaanka ganacsiga ka dib markii signal la siiyo.
Furitaanka booska iibiyay a:
ganacsade waa meel si iibiso ka dib markii midabka cas bilaabo inuu dhiso. Amarkan wuxuu la tagay waa in ay ka cararaan oo dhan ilaa isbedel color in cagaaran.
Furitaanka booska iibsan a:
ganacsade waa meel si iibiso ka dib markii midabka cagaaran bilaabo si ay u sameeyaan. Amarkan wuxuu la tagay waa in ay ka cararaan oo dhan ilaa isbedel color in casaan ah.
Tusaale ku saabsan sida loo furo oo si dhow.
THIS siiya Swing Forex Tusiyaha in Metatrader ah 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
EZT siiya Swing Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo EZT siiya Swing Forex Indicator.mq4?
Download EZT siiya Swing Forex Indicator.mq4
Nuqul EZT siiya Swing Forex Indicator.mq4 aad Metatrader Directory / khubaro / tilmaamayaasha /
Dhanka midig u guji on EZT siiya Swing Forex Indicator.mq4
Tusiyaha EZT siiya Swing Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee in meesha laga saaro EZT siiya Swing Forex Indicator.mq4 ka Metatrader 4 Chart?
THIS siiya Swing
article PreviousAuto Saadaasha Expert Forex Tusiyaha
Next articleKain2 Forex Tusiyaha
FxMath CCI Ganacsade 1 Forex Tusiyaha
Xoog Shumaca Forex Tusiyaha
FxMath CCI Ganacsade 1 Forex Tusiyaha Apr 17, 2019
Xoog Shumaca Forex Tusiyaha Apr 15, 2019
Real Woodie CCI Forex Tusiyaha Apr 12, 2019
Wave Trades Forex Muujiyeyaasha Apr 10, 2019